किन राखिएन दीक्षितको शव एकेडेमीमा ? मर्नु अघी यस्तो भनेका रहेछन - नुवाकोट एक्स्प्रेस : मोफसलकै लोकप्रीय डिजिटल एक्स्प्रेस
किन राखिएन दीक्षितको शव एकेडेमीमा ? मर्नु अघी यस्तो भनेका रहेछन
काठमाण्डौ – मदनमणि दीक्षित वैदिक साहित्यलाई माक्र्सवादी विचारका आधारमा विवेचना गर्न सक्ने सीमित लेखकमध्ये अग्रपङ्क्तिमा लिइने नाम हो । रक्षाबन्धनका दिन बिहानै तिनै मूर्धन्य स्रष्टा दीक्षितको निधनको खबरले नेपाली राजनीति, साहित्य, पत्रकारिता र पाठक वर्ग स्तब्ध भएको छ । कृतिगत र समग्र योगदानको स्मरण गर्दै उहाँको निधनलाई बौद्धिक क्षेत्रमा अपूरणीय क्षतिका रुपमा लिइएको छ ।
उहाँको परिवारका केही सदस्य र शुभेच्छुकले प्रतिष्ठानको परिसरमा शव राख्न पहल गरेका थिए तर दीक्षितले जीवित छँदा आफ्नो शव त्यहाँ नराख्नू भन्नुभएकाले कमलादीमा नराखिएको हो । प्रतिष्ठानले केही वर्षअघि कुनै पनि दिवङ्गत स्रष्टाको शव आफ्नो परिसरमा नराख्ने निर्णय गरेको थियो । प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव प्रा जगतप्रसाद उपाध्यायले दीक्षित प्रतिष्ठानकै पूर्वउपकुलपति भएको र प्रधानमन्त्री ओलीबाटै शव सो परिसरमा राख्न निर्देशन दिए पनि परिवारको चाहनाबमोजिम नराखिएको जानकारी दिनुभयो ।